ပဲကြီးနုနှင့်ဖရုံရွက်ဟင်းချို ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ပဲကြီးနု.................၁ ဗူး( နို.ဆီဗူး)
ဆီ.....................၂ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ဖရုံညွှန်.နုနု( သင်ပြီး)..လက်တစ်ဆုပ်စာ(သို.) ဆူးပုတ်
ကြက်သွန်ဖြူ ၊နီ ၊ ချင်းတွေကိုညှက်နေအောင်ထောင်းပါ။
နှူးလာပြီဆိုမှ..ဆား ၊ ဟင်းခတ်မှုန်.တို.နှင့်အရသာသွင်းပါ။
ခပ်ဖွဖွလေး..နှံ.အောင်မွှေပေးပြီးပြီဆိုမှ....ရေ (၂) လီတာခန်.လောင်းထည့်ပါ။
တစ်ပွက်ဆူပြီဆိုတာနဲ...သင်ပြီးရေဆေးထားတဲ့..ဖရုံညွှန်.နုနု (သို.) ဆူးပုတ်